Wakiilka Neymar oo xaqiijiyay goorta uu Neymar ku biirayo PSG iyo lacagaha lagu iibsanayo – Gool FM
Byare August 2, 2017
(Paris) 02 Agoosto 2017. Sida uu xaqiijinayo wakiilka Neymar waxaa laacibka la soo bandhigi doonaa beri ama beri dambe oo jimco ah.
Kooxda reer France ayaa iminka dooneysa inay dar dar galiso heshiiska ay kula soo wareegeyso xiddiga reer Brazil si uu laacibka kulankiisii ugu horreeyay ugu safto kooxda kulankooda ugu horreeya ee Ligua 1 ay 5-ta August la yeelan doonaan Amiens.
“PSG waxay bixin doontaa lacagaha 222 milyan oo euro ee lagu bur burinayo qandaraaska Neymar, waxaana la soo bandhigi doonaa laacibka inta uusan usbuucu dhamaan.”. Ribeiro ayaa sidaa u sheegay French 24-hour news channel.
Xoog waynta Faransiiska ayaa iminka ku rajo wayn in Neymar uu tjiaabada caafimaad ka gudbi doono beri oo khamiis ah.
“Farxad wayn ayay ii tahay inaan sanadahan kula wadaagay.". Lionel Messi oo si qiiro leh u macsalaameeyay Neymar